Boqolaal arday oo iskaga cararay jaamacadda wadanka Baxreyn – SBC
Boqolaal arday oo iskaga cararay jaamacadda wadanka Baxreyn
Posted by editor on May 25, 2011 Comments
Manama:- Waxaa sii kordhaya qalalaasaha ka taagan jaamacadda Baxreyn kadib markii boqolaal ay arday ka carareen sanad dugsiyeedkan iyagoo ka cabanaya waxa ay ku tilmaameen dabagalka laamaha amaanka ardayda dhigata jaamacadda Baxreyn.
Tani ayaa ku soo beegmaysa kagadaal markii ay waxbarashada jaamacadda ay dib u bilaabatay toddobaadkii la soo dhaafay kadib markii uu hakad ku yimid muddo labo bilood ah sababa la xiriira qalalaasihii kadhacay dalkaas oo ay shacabku ku dalbanayeen isbedel siyaasadeed.
Mid kamid ah ardayda ka carartay jaamacadda ayaa u sheegtay Website-ka Al-jazeera.net in dhamaan albaabada jaamacadda la xiray iyadoo lagu soo koobay hal albaab oo ay joogaan ciidanka booliska islamarkaana bar kontorool ka sameysteen taasi oo sababtay in baabuurta ay istaageen saf dheer ardaydana loo diiday in ay soo jeediyaan khudbadihii ay subaxdi jeedin jireen.
Mid kamid ah ardayda oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa sheegay in dhamaan ardayda lagu qasbay in ay saxiixaan dukuminti lagu sheegay u hogaansanaanta madaxda dalka si ardayga u sii wato waxbarashadiisa iyo dukuminti kale oo ay ku qoran yihiin in ardayga uusan ka qeyb geli Karin
bandhig siyaasadeed iyo mudaaharaad looga soo horjeedo hogaanka dalka.
sidoo kale kuliyadaha iyo dhismayaasha jaamacadda ayaa lagu kala xiray darbi ka sameysan xadiid taasi oo saameyn ku yeelatay isu socodka ardayda dhexdooda.
Dhanka kale madaxa Jamciyadda dhalinyarada Baxreyn ee xuquuqda Insaanka Maxed Almasqadi ayaa sheegay in inkabadan 2 kun oo arday ay ka baxeen jaamacadda sababo la xiriira amaanka oo si aad ah loo adkeeyey iyadoo ay boolisku ka saareen jaamacadda 150 arday oo la sheegay in ay ka qeyb galeen mudaaharaadyadii looga soo horjeeday hogaanka dalka.
Almasqadi ayaa ku nuuxnuuxsaday in Jaamacadda Baxreyn aysan ahayn meel wax lagu baran karo sababo la xiriiro cadaadiska ardayda kaga imanaya alaamaha amaanka.